FANDOM for: Star Wars - Izinhlelo ze-Android ku-Google Play
- Februwari 2, 2018
lokusebenza Fandom analo Star Wars - adalwe abalandeli, abalandeli. Uhlelo lokusebenza Star Wars njalo izici kakhulu-olunembile, ulwazi real-time kusuka emphakathini Fandom sika abanothando abalandeli. Ungalindela ukubona inqwaba yamakhasi okuqukethwe okudalwe abalandeli njengawe. Thola izihloko ku amahlaya, amabhayisikobho, ithelevishini, izincwadi, izinhlamvu, izimpi, izindawo, Lore nokunye, nokunye okuningi! Ayikho enye lokusebenza inikeza le nhlanganisela izici umngane ezikuvumela:
- Dlulisa amehlo: Thola Star Wars izihloko adalwe abalandeli ezivela emphakathini
- Xhuma:. Joyina umphakathi Star Wars ukuxoxa nabalandeli noma uphakamise izinguquko okuqukethwe e - Hlola:. Ukucinga ezinye izinhlelo zokusebenza Fandom umphakathi efana Star Wars kanye nokuqukethwe okuhlobene
isithonjana lokusebenza, skrini konke okuqukethwe ngaphakathi kule lokusebenza Creative Commons abanamalayisensi. (CC-BY-SA) nemininingwane ilayisensi zonke lezi izimpahla zingatholakala ekhasini amalayisense Fandom sika: http://www.wikia.com/Licensing. Njengoba i Fandom lokusebenza olusemthethweni, lolu hlelo lokusebenza ihambisana ngokugcwele imigomo CC-BY-SA ebhalwe kulelo khasi.
Zonke Fandom okuqukethwe kanye okuqukethwe lolu hlelo lokusebenza alayishwe ngabasebenzisi enganyelwe Imigomo Fandom sika Sebenzisa (http://www.wikia.com/Terms_of_Use). Sinethemba anikezelwe kulandelwe Imibandela Fandom sika Yokusebenzisa, kuhlanganise ephendula sokwehlisa i-DMCA izaziso. Ukuze uthole olunye ulwazi sicela ubone-DMCA Inqubomgomo lethu lokwehlisa: http: //community.wikia.com/wiki/Help: DMCA_takedown_notice
Vakashela iwebhusayithi I-imeyili apps@wikia-inc.com Inqubomgomo Yemfihlo
I Star Wars App uxhumano lwakho esemthethweni mobile ukuba galaxy kude, kude.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Monster Hunter.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Warframe.
Lawa Droids oyifunayo.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Imiqulu uMdala.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Bemisebe.
Fandom Umphakathi: Harry Potter
Parody izwi Darth Vader of Star Wars movie odumo - Iringithoni Maker
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Terraria.
Ama-app umphakathi FANDOM sika isici fan okudalwe izihloko, izindaba, izingxoxo
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Nerf.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Dragon Ball.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Five Nights at Freddy sika.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Sonic.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Godzilla.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Pokemon.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on The Last of Us.
Zonke izindaba ezibalulekile mayelana imibukiso, amabhayisikobho, nemidlalo obakhathalelayo.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku GTA.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Splatoon.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Mario.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Call of Duty.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku Slime Rancher.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Bloodborne.
Izici amathiphu fan okudalwe, izihloko, kanye nezingxoxo ku oLwandle Amasela.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo Amandla Rangers.
Izici amathiphu fan wamaBhunu izihloko nezingxoxo on Ben 10.
Esinembile, e-ejulile, adalwe abalandeli.